Komity mitaky ny demokrasia Mitaky ny famoahana ny lalam-pifidianana
Jeneraly Béni Xavier sy Ralala Roger Samy tsara toerana ho praiminisitra
Anarana jeneraly roa no re fa mety hisafidianana izay olona hapetraka eo amin’ny toeran’ny praiminisitra hisolo an’i Mahafaly Solonandrasana Olivier amin’izao fotoana izao dia ny Minisitry ny fiarovam-pirenena Rasolofonirina Béni Xavier sy ny Sekretera jeneralin’ny fiadidian’ny Repoblika Ralala Roger.
Fifidianana 2018 Tsy vonon-kirotsaka Rajoelina…
Efatra taona izay no nialan’ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina teo amin’ny fitondrana. Taloha sy taoriana kelin’ny nitsipahan’ny HVM azy no somary nafana fo tamin’ny resaka politika. Nangina sy tsy hita firy avy eo,
Filohan’ny CENI Hifampidinika amin’ny mpanao politika
Feno ny fandaharam-potoan’ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana na ny CENI amin’ity herinandro ity, hikatsahana hatrany ny fomba rehetra hahatomombana ny fikarakarana ny fifidianana. Anisan’ny hivoitra ny fihaonan’ny filohan’ny CENI Hery Rakotomanana mivantana amin’ireo lehiben’ny antoko politika sy ireo mpanao politika mandritra ny 3
Asandratro ny tanindrazako Fitsarana tsy mahefa no nitsara an-dRavalomanana
Nanamafy ny avy eo anivon’ny antoko Asandratro ny tanindrazako, tamin’ny alalan’ny filohany Andrianina Rajoharison, fa fitsarana tsy mahefa no nitsara ny filoha Ravalomanana tamin’ny fotoan’androny.
Fokontany Anosizato atsinanana II Nitombo ireo nisoratra anarana anaty lisi-pifidianana
Nitombo isa ireo olona voasoratra anarana anaty lisi-pifidianana ho an’ny fokontany Anosizato Atsinanana II,
Didier Ratsiraka “Hisy korontana eto raha atao ny fifidianana”
Natao teny Faravohitra ny faran’ny herinandro teo ny fiarahabana ny filoha mpanorina ny antoko AREMA, ny Amiraly Didier Ratsiraka.
Ravalomanana tany Frantsa « Mendrika ny ho sambatra ny Malagasy »
Nazava ny toromariky ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana tamin’ny fifampiarahabana sy ny fifanakalozan-kevitra tamin’ny mpanohana rehetra tany Frantsa sy Eoropa natao tao Savigny ny sabotsy 13 janoary teo.
Mizotra any amin’ny lalana sy fomba ratsy fanaony hatramin’izay ny fitondram-panjakana manoloana ny fandrirarirana ny famoahana ny lalàna mifehy ny fifidianana, raha ny nambaran’ny avy eo anivon’ny komity
mahana amin’ny tsy fampanjakana ny demokrasia mandritry ny fifidianana na ny CVDE, izay nampahafantarina tetsy amin’ny Colbert Antaninarenina omaly moa ny fitsanganany. Toy ireo lalàna marobe nolaniana mantamanta teny anivon’ny antenimieram-pirenena sy antenimierandoholona tahaka ny sata na rijan-teny mifehy ny fifandraisana na code de communication, izay tsy nisy marimaritra iraisana tamin’ireo voakasika mivantana tamin’izany ihany izy ity, raha izao no fizotrany, hoy hatrany ny fanazavana. Mitaky tsy misy hatak’andro ny fitondram-panjakana ny famoahana io volavolan-dalàna io mialoha ny fandrosoana azy eo amin’ny filankevitry ny governemanta aloha, ary indrindra, mialoha ny hampandaniana azy ho lalàna eny anivon’ny antenimiera roa tonta, noho izany, ny CVDE ary maniry mba hifanaraka amin’izay nifanarahan’ny rehetra no ho voarakitra ao anatiny mba tsy hiverenan’ny krizy intsony.